Ịzụta Trenavar ntụ (4642-95-9) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / ndị ọzọ na- / Trenavar ntụ ntụ (4642-95-9)
SKU: 4642-95-9. Category: ndị ọzọ na-
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Trenavar ntụ (4642-95-9), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro nchịkọta mma.
Trenavar ntụ ntụ a maara nke ọma dị ka Estra-4,9,11-triene-3,17-dione, yana Trendione ma bụrụ 10 ugboro karịa androgenic karịa Testosterone. Trenavar bụ prohormone nke na-elekwasị anya na 17b-HSD1 iji mepụta Trenbolone arụ ọrụ, nke pụtara ozugbo n'ime ahụ gị Trenavar na-abanye n'ime Trenbolone ma ọ bụ Tren.
Trenavar ntụ ntụ video
Trenavar ntụ ntụ isi agwa
aha: Trenavar ntụ ntụ
Molekụla Formula: C18H20O2
Trenavar ntụ ntụ
Aha Mmiri: Estra-4,9,11-triene-3,17-dione
Aha ndị ọzọ: Trendione, Trenabol, Elite Tren, T-Var 15 na Super Trenabol.RU-2065, Trenava rpowder, Trendione ntụ ntụ
Trenavar ntụ ntụ Usage
Trenavar ntụ ntụ bụ nke a maara dị ka Estra-4,9,11-triene-3,17-dione, yana Trendione na 10 ugboro karịa androgenic karịa Testosterone. Trenavar raw powder bụ prohormone nke na-elekwasị anya na 17b-HSD1 ịmepụta ọkụsi Trenbolone, nke pụtara ozugbo n'ime ahụ gị Trenavar raw ntụ ntụ ghọọ ndị Trenbolone aka Tren. Trenavar ntụ ntụ ndị ọrụ na-enweta ike dị ukwuu na-abawanye nakwa dị ka uka. Ndị ọrụ na-enwetakwa ụba abụba na ụba vascularity nke akwara. Ngwakọta Trenavar ntụ ntụ emeela ka ọtụtụ ndị na-ewu ewu ma na-achọ ya n'ihi ihe dị ike ya na mkpirikpi oge. Ọ bụ n'ezie ụwa kasị mma mgbe ị na-atụle ọnụọgụ ego na abụba na-efu.
Trenavar raw ntụ ntụ, nke a makwaara dị ka Trendione, bụ ndụmọdụ probe nke dị iche na steroid trenbolone nke a maara nke ọma na ketone na ọnọdụ 17th. Ya mere, ọ na-arụpụta trenbolone na-arụsi ọrụ ike n'ahụ, na-eme ka ọ bụrụ nnukwu ihe dị ike. Ebe ọ bụ na o yiri nke ahụ na trenbolone, na-abụghị ụkwara ụkwara (nke na-abụkarị nsị nke ịbanye na mberede), onye ọrụ kwesịrị inwe nsonaazụ yiri ya ka ọ na-eji trenbolone injectable.
Nke a na-eme ngwa ngwa-na ndị ọrụ ahụ weere na ha nwere ike ịhụ nsonaazụ ozugbo 7 gaa na 10 ụbọchị mgbe ntinye mbụ nke Trenavar ntụ. Otú ọ dị, naanị ihu ala bụ Trenavar raw ntụ ntụ nwere ike belata oge niile ị na-enwe ntachi obi, nke nwere ike ime ka ọ ghọgbuo gị na ị ga-adịgide adịgide ruo ogologo oge ị nwere ike mgbe ị na-etinye aka na cardio.
Ugbu a ka a na-ewere Trenavar ntụ ntụ dị ka prohormone pụrụ iche, ọ na-ekere ọtụtụ àgwà ndị dị otú ahụ na Trenbolone, steroid na-injectable na nke ahụ nwekwara ọtụtụ ndị na-eso ụzọ n'ụwa. Ihe na-ekewa abụọ site na ibe ya bụ eziokwu ahụ bụ na ọ bụ nanị ketone na ọnọdụ 17th site na nke ikpeazụ na mpaghara ha.
Kedu ihe nyocha nke Trenavar ntụ ntụ
Ọtụtụ ndị na-agba ọsọ na 30 ka 45mg nke Trenavar ntụ kwa ụbọchị maka ụbọchị 30 na nkwado usoro. Ọ kachasị mma ịkewaa usoro a n'elu 2 na 3 ọrụ nke 15mg kwa ụbọchị.
Na mbido, a ghaghị iji ọgwụ na 50-70 milligrams (mg) kwa ụbọchị mgbe ọ na-agba ọsọ naanị ya, ọ bụrụ na ọ bụrụ na mmetụta adịghị emetụta, a ga-enwe ike ịgbatị usoro nke 100mg. Ọ dịghị mkpa ka ị gafee usoro ahụ, ọ gaghịkwa agba ọsọ karịa oge 5 ma ọ bụ 6.
Ọ bụrụ na ejiri ya dị ka akụkụ nke nchịkọta, a na-atụ aro ka ị jiri trendione mee ka ọkpụkpụ na-agagharị, na obere ntinye nke 20-50mg kwa ụbọchị nkewa bụ oke ego. Ọtụtụ ndị ọrụ na-ahọrọ nchịkọta nhazi, testosterone, ma ọ bụ primobolan na ya. Kedu ihe ọzọ, ụfọdụ ndị ọrụ na-ahọrọ iji nchịkọta na deca durabolin, kama buru n'uche na ọ bụ nanị ndị ọkachamara nwere ahụmahụ ka ha ga-eme ka ha ghara ịkwado mmadụ abụọ.
Mgbe ị na-eji ya eme ihe maka oge mbụ, ọ kwesịrị ịdị na-agba ọsọ n'obere kachasị iji chọpụta ihe ị mere.
Olee otú Trenavar ntụ ntụ si arụ ọrụ?
Trenavar raw ntụ ntụ na-arụ ọrụ site n'ilekwasị anya na 17b-HSD1 ma mesịa gụọ mmanụ ahụ na ntụgharị dị n'ime ahụ gị na trenbolone. Trenbolone na Trenavar ntụ ntụ yiri nke ahụ, n'eziokwu, ha na otu 3 conjugated abụọ agbụ. Trenavar raw ntụ ntụ dị iche n'eziokwu na o nwere 17 ketone. N'ihi ya, ndị ọrụ na-enweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ihe ahụ ha ga-eme site na ịme usoro trenbolone.
Ndị ọrụ na-ekwu na mmụba na-abawanye na ngwongwo ha na ume na-agafe na osisi ahụ, na uru ndị na-amalite ime n'ime 7-10 ụbọchị mgbe ntinye mbụ. Mgbe izu 4-6 gasịrị, ọtụtụ ndị ọrụ na-enye ume ọzụzụ ga-asị na ha dị nso, ma ọ bụ karịa, ihe ndekọ ha onwe ha na ebuli ha. Ọzọkwa, ha na-ekwupụtakwa na ahụ na-adịwanye njọ, nfuli dị elu mgbe ha na-azụ ọzụzụ, na ọtụtụ nkwarụ.
Banyere ụdị ntachi obi nke ịzụ ọzụzụ, ọ na-abụkarị ihe na-adịghị mma, n'ihi na ọ ga-eme ka njedebe gị kwụsị.
E wezụga uru ndị dị otú ahụ, bodybuilders na-agakwa Trenavar ntụ ntụ iji mee ka ọ dị mma n'usoro ịzụta. Bịa chee echiche banyere ya. Kedu ihe mere ị ga - eji mee ka ịgbanye mgbe ị nwere ike ịsị otu ihe ahụ? A pụkwara iji ya mee ihe dị ka prohormone standalone ma ọ bụ akụkụ nke nchịkọta.
Nkọwa a bụ naanị ụlọ ọrụ a na-emepụta na Trenbolone mgbe anụ ahụ metabolized. Ugbu a, enwere ọtụtụ Trenavar raw ntụ ntụ "clones" nke ị nwere ike ịga n'ihi na, n'ezie, ndị a gbanwere n'ime dienolone, bụ nke na-esighi ike ma e jiri ya tụnyere ya.
Trenavar ntụ ntụ dị nnọọ mma ma na-ejikwa bodybuilders na-ejikarị ya eme ihe n'oge asọmpi oge ochie nakwa n'oge oyi. Ọtụtụ ndị na-ahụmahụ nke akụkọ prohormone na ụlọ ọrụ a nwere ikike ọ bụghị nanị ijide, kama ọ na-abanye na mgbakọ ndị ọzọ n'oge ndị a mgbe ejikọtara ya na nri obere calorie.
Tụkwasị na nke a, Trenavar raw ntụ ntụ adịghị agbanwe n'ime estrogen ma ghara ịmepụta mmetụta ọ bụla nke estrogenic mgbe a na-emegharị cycled. Otú ọ dị, ọ ka dị oké mkpa na ị ga-enweta usoro ọgwụgwọ ọkpụkpụ kwesịrị ekwesị ma ọ bụ PCT na-aga mgbe ọ na-agbago na ndụmọdụ a iji gbochie mmetụta ọ bụla na-akpata nsogbu.
Ugbu a, mgbe Trenavar raw ntụ ntụ adịghị agbanwe ka estrogen ma ghara ịmalite mmetụta nke estrogenic, ọ dị ezigbo mkpa na ị ga-enweta usoro nlekọta mgbakọ usoro kwesịrị ekwesị ma ọ bụ PCT na-aga mgbe ịgbagoro na prohormone a. Ebe ọ bụ na Trenavar ntụ ntụ dị oke ike, ị ga-achọ PCT iji nyere aka gị akaghachị mgbe ị nyesịrị prohormone ma kwalite usoro nke hormone gị.
Trenavar raw ntụ ọka Marketing
A ga-enye ya n'ọdịnihu na-abịa.RU-2065
Trenavar ntụ ntụ nwere mmetụta ọ bụla
Dị ka usoro ọhụụ ọ bụla, ndị ọrụ na-ahụ mmụba nke ọbara mgbali na cholesterol dị elu mgbe ha na-agba Trenavar uhie. N'ọtụtụ ọnọdụ, ọbara mgbali elu dị elu na-apụ mgbe okirikiri ahụ zuru ezu, a pụkwara iwepụ ihe ndị dị na imeju na nkwado kwesịrị ekwesị na nkwado usoro gburugburu na ọgwụ Post Cycle. Trenavar akpụ ntụ pụkwara ime ka mwakpo na-ebelata ma na-ebelata libido ruo nwa oge. Ozi ọma bụ na Trenavar raw ntụ ntụ anaghị eme ka ọ bụrụ nke na-apụta na ọ gaghị atọghata na Estrogen. Ya mere ị ghaghị ichegbu onwe gị gbasara ịmepụta Gyno Aka Man.
Trenavar ntụ ntụ ga-eme ka ala gị thyroid na-ebute mmepụta nke Prolactin. Nnukwu mmepụta prolactin nwere ike iduga n'inwe uche, obi nkoropụ, na ịkụ anụ na mpaghara ahụ. Iji gbochie ụdị mmetụta ndị a, jiri onye mmechi prolactin n'oge okirikiri dịka Inhibit-P site SNS ma ọ bụ Prolactrone site na Black Lion Research.
Ndị maara "Tren Cough" adịghị mkpa ichegbu onwe ha banyere nke ahụ mgbe ị na-agba Trenavar obere ntụ ntụ n'ihi na ọ bụ nanị mmetụta dị n'akụkụ nke injectables. Nke a abụghịzi nchegbu dịka Trenavar ngwa ngwa uzuzu na-ewere ọnụ ọnụ.
Trenavar ntụ ntụ bụkwa mkpesa nke na-abụghị nke methylated nke pụtara na ọ bụghị dịka aka siri ike n'ahụ, ma nke a apụtaghị na ịkwesịrị ịkwado nkwado okirikiri. Nkwado usoro nkwado dị mkpa na usoro ọ bụla ọ bụla.
N'aka nke ọzọ, ọrụ ndị na - esonụ na - akọ site n'aka ndị ọrụ ugbua na - agba ịnyịnya na Trenavar akpụkpọ anụ:
Nwere ike ime ka isi ọwụwa na ọnyá na ụkwụ
Mbelata ogo gịroid
O nwere ike ime ka m tinye aka n'ọbara shuga
Nwere ike ịmepụta prolactin
O nwere ike ime ka ọgbụgba cholesterol ọjọọ na ọbara mgbali elu
Nwere ike itinye ihe na-akpata obi na imeju
Nwere ike ime ka ụda ehighị ụra nke ọma, ike ọgwụgwụ na ikpo ọkụ
Ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ akụkọ na-emesi Trenavar ntụ ntụ ike ime ka "ụkwara ụkwara," nke a abụghị ihe ị ga-agafe mgbe ị na-eji prohormone a. Ị nwere ike ịnweta otu ahụ mgbe ị na-eji Trenbolone injectable
Esi zụta Trenavar ntụ ntụ si AASraw
Trenavar raw ntụ ntụ Ezi ntụziaka
Ịjụ ajụjụ maka ndị na - anọchite anya anyị (CSR) maka nkọwa, maka amaokwu gị